Home News Dagaal culus oo ka dhacay deegaano katirsan Gobolka Hiiraan
Dagaal culus oo ka dhacay deegaano katirsan Gobolka Hiiraan
Warar dheeraad ah ayaa ka soo baxaya dagaal geystay khasaaro iusgu jira dhimasho iyo dhaawac oo ka dhacay deegaano ka tirsan gobolka Hiiraan.
Dagaalka ayaa waxa uu ka dhacay deegaanka Ceel-Cadde oo 70km u jira degmada Farlibaax ee Gobolka Hiiraan,waxaana uu yimid kadib markii ay Al-Shabaab weerar ku qaadeen deegaanka Ceel-Cadde oo ay ku sugan yihiin Ciidamo ka tirsan kuwa dowladda.
Guddoomiye ku xigeenka dhinaca Amniga ee Maamulka Gobolka Hiiraan Cabdiraxiin Muxumed Taakooy ayaa sheegay in Ciidamada xoogga dalka ee ku sugan deegaanka Ceel-Cadde ay iska difaaceen Al-Shabaab oo weerar kusoo qaaday.
Waxa uu sheegay in dagaal xooggan oo deegaankaasi ka dhacay ay ku dileen 4 ka tirsan Al-Shabaab,isla markaana deegaankaas ay haatan gacanta ku hayaan Ciidamada Dowladda.
Shalay ayay aheyd markii dagaal xoogan uu duleedka degmada Maxaas ee Gobolka Hiiran uu ku dhexmaray Ciidamada Dowladda iyo Al-Shabaab,waxaana dagaalkaas guulo ka sheegtay Saraakiisha Ciidamada Dowladda ee Gobolkaasi Hiiraan.
Previous articleWasiirka Maaliyadda iyo Qorsheynta dalka Koonfurta Suudaan oo balan qaad u sameeyay Ganacsatada Soomaalida ee Dalkaasi ku nool
Next articleXildhibaan Mahad Salaad ”sifo sharci ah looma marin kala dirista Golaha Maaliyada ee Baarlamaanka Soomaaliya
madaxweyne Farmaajo oo Wali Wada Safaro Qarash Badan Ku Baxaya! oo...
Golaha Iskaashiga Dowlad Goboleedyada Soomaaliya ayaa warbixin kasoo saaray Xarigii Cabdiraxmaan...